Talaabo Midawga Yurub Uu Qaadayo Oo Saamayn Ku Yeelanaysa Ciidamada Kenya Ee Ku Sugan Soomaaliya |
Talaabo Midawga Yurub Uu Qaadayo Oo Saamayn Ku Yeelanaysa Ciidamada Kenya Ee Ku Sugan Soomaaliya
Midowga Yurub ayaa laga billaabo bisha June ee sanadkan waxay aad u dhimayaan lacagaha uu magdhaw ahaanta u siiyo dowladda Kenya oo ay ciidamo ka joogaan dalka Soomaaliya, kuwaasi oo qeyb ka ah hawlgalka Midowga Afrika ee Amisom, sida uu qoray wargeyska Business Daily ee ka soo baxa dalka Kenya.
Sida uu sheegayo wargeyskani, lacagtaasi uu dhimayo Midowga Yurub ayaa ka dhigan in Kenya ay ku khasbanaan doonto in ay si tartiib tartiib ah ciidamadeeda ugala soo baxdo dalka Soomaaliya.
Wargeyska oo soo xiganaya wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa sheegay in sanad miisaaniyadeedka soo socda ee billaabmaya bisha June ee sanadkan, ay Kenya ka dalban doonto Midowga Yurub lacago aad uga yar kuwii ay sanadkii hore magdhaw ahaan uga dalbatay.
Midowga Yurub ayaa sidoo kale sanadka soo socda lacagahaasi sii yareyn doono.
Kenya ayaa sida uu sheegaya wargeyskani waxa ay fileysaa in Midowga Yurub ay ka hesho ku dhawaad 49.5 milyan oo doolar, lacagtaa oo u dhiganta mid boqolkiiba 41.17 ka yar lacagtii magdhaw ahaan Kenya loo siiyay sanadkan, taas oo gaadheysay 84.12 milyan oo doolar.
Sidoo kale waxaa la filayaa in laga billaabo bisha June ee sanadka 2020-ka, Midowga Yurub uu lacagahaasi gaadhsiin doono 34.65 milyan oo doolar, iyadoo sanadka xigana la gaadhsiinayo 29.69 milyan oo doolar.
Qiyaastii afar kun oo askari ayaa Kenya ka jooga gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo qeyb ka ah hawlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Amisom ee haatan uu hoggaamiyo janaraal Tigabu Yilma Wondimhunegn, oo u dhashay dalka Itoobiya.
Beesha caalamka ayaa askari kastaa oo ka tirsan hawlgalka AMISOM waxa ay siisaa 1,028 doolar oo mushaar ah bil kasta. Dowladaha waddamada ay askartani ka soo kala jeedaan ayaa askari kastaa waxa ay canshuur ahaan ka goysaa 200 oo doolar, taa oo ka dhigan in askarigiiba uu bil kastaa mushaar ahaan u helo 800 oo doolar, waxaana lacagahaasi loo soo mariyaa dowladahooda.
Dowladda Kenya ayaa sanadkii 2011-kii waxa ay Soomaaliya u dirtay 4,660 oo askari, si ay ula dagaallamaan mintidiinta ururka Al-Shabaab oo ay ku eedeysay weerarro iyo afduubyo ka dhacayay gudaha Kenya.
Sanad ka dib ayaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey waxa uu Kenya u ogolaaday in ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ay ka mid noqdaan kuwa Midowga Afrika, sidaasina Qaramada Midoobey iyo beesha caalamka ay ku bixiyaan kharashka ciidamadaasi ku baxaya.
Ciidamada Amisom ee haatan ka hawlgala Soomaaliya ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan waddamada Uganda, Burundi, Jabuuti iyo Kenya.
Kenya ayaa horraantii bishii Maarso ee sanadkan waxa ay ciidamadeeda kala soo baxday deegaannada Busaar iyo Faaxfaxdhuun ee gobolka Gedo, halka bilo ka horna ay ciidamadeeda kala baxday magaalada Baardheere iyo degaanka Tarako ee isla gobolkaasi Gedo.
Marka laga soo tago gudaha magaalada Baardheere oo ay joogaan ciidamada Itoobiya, inta badan deegaannada ay ciidamada Kenya ka bexeen ee gobolkaasi ayaa waxaa markiiba la wareegay ururka Al-Shabaab.
Kenya ayaa sidoo kale ciidamadeeda kala baxday magaalada Ceel-Cadde ee gobolkaasi Gedo ka dib markii mintidiin ka tirsan Al-Shabaab ay cagta mariyeen saldhiggaasi. Inkastoo Kenya aysan shaacin tirada rasmiga ah ee uga dhimatay weerarkaasi Ceel-Cadde, haddana ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan askarta Kenya ay ku dileen weerarkaasi.